Apoyo Mutuo: Awoodda Dhisida Jannada - Gargaarka Musiibada ee Is-kaashatada ah
Bogga ugu weyn/updates/Apoyo Mutuo: Awoodda Dhisidda Jannada
Laba sano ka dib Hurricane Maria, the Centros de Apoyo Mutuo wali waa mid firfircoon, dadka awood u leh, tusaalooyin ku nool caawinaada labada dhinac iyo iska caabbinta ku saleysan bulshada iyo adkeysiga.
Beesha Bucarabones ee Las Marias, isla markii Hurricane Maria ka dib, gobolka waxaa lagu qasbay inuu dib ulaabo wajigii masiibada oo uu ka baxo dhulkiisii. In kabadan laba usbuuc kadib duufaanta, gargaarkii ugu horreeyay ee bannaanka ka yimid wuxuu muujiyey qaab xulafo ah dhaqdhaqaaq ka socda San Juan. Iyaga oo kaashanaya asxaabtan cusub, ayay aasaaseen CAMBU (Centro de Apoyo Mutuo Bucarabones Unido) si loo bixiyo iscaawinta labada dhinac, oo salka ku haysa halganka loogu jiro caddaaladda bulshada, dhaqaalaha, dhaqanka iyo deegaanka. Qabanqaabiyeyaasha iyo xubnaha bulshada ayaa isku baheystay inay buuxiyaan booska, dib u soo celiyaan dhismayaasha dowladii hore, iyo inay daboolaan baahiyaha dadka.
Maanta, CAMBU waxay u adeegtaa sidii jikada bulshada, waxay martigelisaa fasalo farshaxan oo loogu talagalay carruurta maxalliga ah, waxay bixisaa nashaadaadyo dhaqameed, aqoon isweydaarsiyo waxbarasho, iyo baahi aad u weyn oo boos wadaagga ah.
Gargaarka Musiibada ee Maskaxdu wuxuu iskaashi la yeeshay CAMBU labadii sano ee la soo dhaafay iyadoo ay jiraan waxyaabo ay ka mid yihiin kiliinigyada kor-u-qaadista, abuurista agabyo waxbarasho oo ku saabsan yareynta dhaawacyada carruurta, iyo ka caawinta hagidda nidaamka shaqo-qorista.
Intii lagu jiray usbuuca dhammaadka Oktoobar 12th, 2019, mashruuc kaabayaal madax-bannaan oo qorsheysan ayaa la soo gabagabeeyey.
Gargaarka Musiibada ee Masalaha oo lala kaashanayo CAMBU, iyo caawimaad farsamo iyo mid maaliyadeed oo muhiim ah oo ka socota Mashruuca Cagaha, Mashruuca Solar Village, Shirka Rock Spring, Iyo Kooxda Sail Relief Team, wuxuu awood u yeeshay inuu ku rakibo 3kw qorraxda korantada qorraxda, oo leh nidaamka xakamaynta Sol-Ark inverter / charge, iyo laba baytariyada Simpliphi lithium oo loogu talagalay awoodda gurmad. Sol-Ark iyo muraayadaha dheeriga ah ee aan uga tagnay CAMBU waxay noo oggolaaneysaa inaan si dhakhso leh u ballaarinno nidaamka qoraxda ee 11kw marka boosku diyaar u yahay.
Waa xirmo-hawleed qoraxdu ka baxdo oo si dhib yar kor u qaadaya oo awood u siin kara xarunta gargaarka wadaagga ah sannadaha soo socda.
Waxaan ku xirnay rakibaadda gacmo ku saabsan heerka qorraxda ee tababarka qorraxda ee Isbaanishka Bosque Modelo, iyadoo la adeegsanayo manhajka Solar Energy International. Intaa waxaa dheer, kooxuhu waxay qaybiyeen in ka badan 1,200 Sunnova muraayadaha sawir-qaadista ee beeraha yar yar iyo waxay siisay Centro de Apoyo Mutuo ee Lares u dhow leh qaybaha nidaamka lagama maarmaanka u ah nidaamka qoraxda saqafka sare ee iyaga u gaarka ah.
Booqashadu waxay gacan ka gaysatay xoojinta wada shaqeynta aan la leenahay ururada iskaashatada iyo aasaaska aasaaska dadaallada mustaqbalka. Si wada jir ah, waxaan mustaqbalka u raadinay meelo ku rakiban jasiiradda oo waxaan mar hore bilownay inaan horumarinno agabyada tababbarka qorraxda si aan u xoojinno diiradda aan u leenahay dhisidda awoodda.
Rakibaadda CAMBU waa ta saddexaad ee Centro de Apoyo Mutuo rakibaadda Qalabka Gargaarka Musiibada ee Mutual Aid Musiibo ayaa gacan ka geysatay fududeynta Puerto Rico. Ugu weyn, a Nidaamka sanduuqa weelka 16kw, wali waxaa loo isticmaalayaa waxa hada ah Centro de Transformacion Comunitaria, hoyga dharka lagu dhaqo ee bulshada, maktabad, rug caafimaad, karate, Zumba, iyo barnaamij yoga, umeerin, iyo boos fanaaniin iyo carqalad ganacsi yar.
Xilliyadaha isla markiiba musiibo weyn kadib waa muhiim. Xitaa usbuucyo kadib, waxaan badanaa ka maqalnaa bulshooyinka in aan nahay gargaarkii ugu horreeyay ee ay arkaan. Laakiin soo kabashadu waa geeddi-socod muddo dheer ah. Sidoo kale waa muhiim in la dhiso cilaaqaad macno leh oo taageero muddo dheer ah, oo waqti iyo soo noqnoqonaya.
Mana rabno inaan kaliya dib ugu dhisno heerka xaaladda musiibo ka hor. Waxaan dooneynaa wax dheeri ah. Markaan dhisno koronto inta nalalku maqan yihiin, waxaan rabnaa inay wax sii jiraan. Marka darbiga uu ku yaallo dildilaac, waxaan rabnaa in uu balaariyo, ma xirna.
Mararka qaar way ku dhacdaa.